သခှားသီး နဲ့ သကွားကိုသုံးပွီး ဆားဝကျခွံကို ဖယျရှားနညျး – Askstyle
သခှားသီး နဲ့ သကွားကိုသုံးပွီး ဆားဝကျခွံကို ဖယျရှားနညျး
ဆားဝကျခွံရှိတာဟာ အလှပကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစရာတဈခုပါ။ ဆားဝကျခွံမြားနလေို့ စိတျညဈနတေဲ့သူတှအေတှကျ နညျးလမျးကောငျးကို
မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။သခှားသီးနဲ့ သကွားကို လှယျလှယျကူကူပဲ အသုံးပွုပေးနိုငျပါတယျ။ပါဝငျပစ်စညျး သခှားသီး ပါးပါး တဈစိတျ၊ သကွား လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ဇှနျး
ပွုလုပျနညျး သခှားသီးပါးပါးပျေါကို သကွားဖွူးလိုကျပါ။ အဲဒါဆိုရငျ သုံးဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။ ဘယျလိုသုံးမလဲ ?? အရငျဆုံး တဘကျတဈခုကိုရနှေေးလေးစှတျပွီး နှာခေါငျးပျေါမှာ ၂ မိနဈလောကျ အုပျပေးထားပါ။ရနှေေးပူပူက
ခြှေးပေါကျပှငျ့စမှောဖွဈပါတယျ။ဒါဆို ဆားဝကျခွံဖယျရှားဖို့လှယျသှားပါပွီ။စောစောလုပျထားတဲ့ သကွားနဲ့ သခှားသီးကို ယူပွီး နှာခေါငျးပျေါမှာ
ပှတျတိုကျပေးပါ။ ၅ မိနဈလောကျပှတျတိုကျပေးရမှာဖွဈပါပွီ။ သကွားအရညျပြျောသှားတဲ့ထိလုပျပေးပါ။
ပွီးရငျ ရအေေးအေးလေးနဲ့ ဆေးခပြေးလိုကျပါ။ ဒါဆို ခြှေးပေါကျလေးတှေ ပွနျကဉျြးသှားပါလိမျ့မယျ။ပွီးရငျ တိုနာလိမျးပေးထားပါ။ညနေ အပွငျကပွနျလာပွီး ရခြေိုးပွီးရငျ ပဲဖွဈဖွဈ ရမေခြိုးခငျပဲဖွဈဖွဈ
လုပျပေးနိုငျပါတယျ။ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဆားဝကျခွံကငျးစငျတဲ့အသားအရကေို ရရှိပိုငျဆိုငျလာစမှောပါ။ တဈပတျကို ၃ ကွိမျလောကျပုံမှနျလုပျပေးပါ။ရိုးရှငျးတဲ့ပါဝငျပစ်စညျးနှဈမြိုးတညျးနဲ့ ဆားဝကျခွံကငျးစငျတဲ့ အသားအရကေို ရရှိပိုငျဆိုငျနိုငျပါပွီ။
ဆားဝက်ခြံရှိတာဟာ အလှပကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုပါ။ ဆားဝက်ခြံများနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းကို
မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။သခွားသီးနဲ့ သကြားကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်း သခွားသီး ပါးပါး တစ်စိတ်၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ပြုလုပ်နည်း သခွားသီးပါးပါးပေါ်ကို သကြားဖြူးလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် သုံးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘယ်လိုသုံးမလဲ ?? အရင်ဆုံး တဘက်တစ်ခုကိုရေနွေးလေးစွတ်ပြီး နှာခေါင်းပေါ်မှာ ၂ မိနစ်လောက် အုပ်ပေးထားပါ။ရေနွေးပူပူက
ချွေးပေါက်ပွင့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို ဆားဝက်ခြံဖယ်ရှားဖို့လွယ်သွားပါပြီ။စောစောလုပ်ထားတဲ့ သကြားနဲ့ သခွားသီးကို ယူပြီး နှာခေါင်းပေါ်မှာ
ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ၅ မိနစ်လောက်ပွတ်တိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါပြီ။ သကြားအရည်ပျော်သွားတဲ့ထိလုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဆေးချပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ကျဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင် တိုနာလိမ်းပေးထားပါ။ညနေ အပြင်ကပြန်လာပြီး ရေချိုးပြီးရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေမချိုးခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆားဝက်ခြံကင်းစင်တဲ့အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်လာစေမှာပါ။ တစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ်လောက်ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။ရိုးရှင်းတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးတည်းနဲ့ ဆားဝက်ခြံကင်းစင်တဲ့ အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။